pls give me some idea for mini project.........pls hlep bro & sis - MYSTERY ZILLION
pls give me some idea for mini project.........pls hlep bro & sis
Vote Up1Vote Down psychoz November 2012 Posts: 16Registered Users ကျနော် project တစ်ခုလုပ်မလို့....idea မရှိသေးလို့..........idea လေးတွေရှိရင်ပြောပြပေးပါအုံး...လွယ်လွယ်လုပ်လို့ရမယ့်ဟာပေါ့......ပထမနှစ်ပဲရှိသေးတယ် Major ကSE က Java နဲ့ရေးမှာပါ............pls help bro & sis	9 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down saturngod November 2012 Posts: 4,595Administrators Project တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာထက် ငါ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။အခု လက်တလော ကိုယ့် မှာ ဘာ ပြဿနာ ရှိနေလဲ ? အဲဒီ ပြဿနာကို code ရေးပြီး ဖြေရှင်းလို့ရမလား စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဥပမာ ။။ ကျွန်တော် manga download offline ချထားချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် python နဲ့ ရေးလိုက်တယ်။ https://github.com/saturngod/mangareader-to-ebookအဲလိုပဲ ။ ကိုယ် အခု ဘာလုပ်ချင်နေလဲ။ အဲဒါကို ဘာနဲ့ ရေးရင် ရမလဲ ?နောက်ပြီး first year project scope က ဘယ်လောက်ထိ ရှိလဲ ?Guide Line တွေ ပါပြီသားလား ?အခြားသူတွေ ပြောတဲ့ project ထက် ကိုယ့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် project တစ်ခု လောက် စလုပ်ကြည့်ပါ။	Vote Up0Vote Down psychoz November 2012 Posts: 16Registered Users dictionary တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ရော ကျနော်တို့levelနဲ့ရေးလို့ရနိုင်မလား......eg:Thai-Myanmar-English Vote Up0Vote Down saturngod November 2012 Posts: 4,595Administrators Dictionary ကအလွယ်ဆုံးရေးသားလို့ရပါတယ်။Dictionary မှာ အဓိက လိုအပ်တာက Data ပါပဲ။Dictionary တစ်ခုမှာ၁။ Data တွေ Database က Table တစ်ခုမှာရှိတယ်။၂။ SQL like ကို သုံးပြီးတော့ Table ကနေ ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။၃။ ပြီးရင် Screen မှာ ပြန်ပြတယ်။ဒါလေးပဲပါပါတယ်။Database သုံးတတ်ရမယ်။ SQL သိရမယ်။ နှစ်သက်ရာ programming language တစ်ခု သိရမယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရပါပြီ။	Vote Up0Vote Down CalmHill November 2012 Posts: 1,177Super Moderators ကိုယ်ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာအထိ လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတာက ကိုယ်ပဲအကောင်းဆုံးသိတာမဟုတ်လား တစ်ခြားလူက အကြံပေးလို့ကိုယ်နဲ့ မကိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲ နောက်ပြီးတော့ ပရောဂျက်အိုင်ဒီယာကို ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါ အဲဒါမှပဲစဉ်းစားတတ်လိမ့်မယ် ပရိုဂရမ်ရေးသင်တယ်ဆိုတာက လွယ်ပါတယ် စဉ်းစားတတ်ဖို့ကခက်တာ ကိုယ်တိုင်မစဉ်းစားရင် ဘာမှမတတ်ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ရေးကြည့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ Error တွေ Technical Issues တွေတွေ့ရင် ရပါတယ်အချိန်မရွေးပြန်လာမေး ဖြေပေးလို့ရပါတယ် Technical ပြဿနာတွေက ကသူများဖြေတာ ကြည့်သုံးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး သိတဲ့လူပြောလိုက်တော့ အချိန်ကုန်သက်သာတယ် စဉ်းစားတာကတော့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါ။	Vote Up0Vote Down psychoz November 2012 Posts: 16Registered Users hote....thx for kind regarding........	Vote Up0Vote Down hackkarlay December 2012 Posts: 9Registered Users Bro.. Saturn God.can you teach me how to .. create dictionary ... or ..where can i study about that ?	Vote Up0Vote Down thaik aung January3Posts: 5Registered Users SQL like သုံးပုံသုံးနည်း ပြောပြပါလား ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် SQLite data encryption Tool လေးရနိုင်မလား ခင်ဗျာ Vote Up0Vote Down saturngod January9Posts: 4,595Administrators SQL like ဆိုတာက SQL က like ကို ပြောတာပါ။ဥပမာSELECT name from users where name like '%ko%'ဆိုရင် ko ပါတဲ့ စာလုံးတွေ ရှာပေးပါလိမ့်မယ်။SQLite data encryption tool တော့ ကျွန်တော် မသိပါ။	Vote Up0Vote Down CalmHill January 19 Posts: 1,177Super Moderators You can use http://sqlcipher.net/ for encrypting sqlite database.	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
January 19 hackkarlay
December 2012 psychoz
November 2012 saturngod
January9thaik aung
January3Powered by Vanilla